Wasiirka cadaaladda oo tababar aqoon kororsi dhanka luqadaha ah u furay askar ka tirsan ciidanka Asluubta – Walaal24 Newss
Xaflad lagu qabtay Xabsiga dhexe ee Xamar ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka Wasaaradda Cadaaladda XF Soomaaliya iyo saraakiisha Ciidanka Asluubta iyadoo halkaas tababar aqoon kororsi ah oo la xiriira dhanka luqadaha uu ufuray wasiirku qaar ka tirsan Ciidanka Asluubta.
Kooxda Onkod ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay suugaan ka turjumeysa wacyi galinta iyo dhiiri galinta askarta taliye ku xigeenka Ciidanka Asluubta Cabdi Kariin Cali Afrax ayaa ka hadlay tababarka iyo muhiimadiisa waxaana uu xusay In taliska ay ka go’antahay in la tayeeyo oo sare loo qaado aqoonta askarta.
“Mudane Wasiir waxaan halkaan kuugu yeernay In aad noo furto tababar la xiriira dhanka luqadaha oo aan u qabaneyno dhalinyarada Jaamiciyiinta ah ee askarta ku soo biiray waxaan naga go’an in aan ka dhisno askarta dhan kasta sida wadaniyada iyo aqoonta intaba”ayuu yiri Taliye xigeenka.
Wasiirka Cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu furan yahay tababarka askarta isla markaana muhiim ay ciidanka u tahay in ay iska dhisaan dhanka luqadaha.
“Xukuumadu waxaa ay leedahay dhowr tubood waxaa ku jirta tubta Cadaaladda iyo amniga wacyi galinta ayaa tiir u ah Kooxda Onkod waa ku mahadsan yihiin suugaantii ay soo bandhigeen waa muhiim Luqadaha in askarta iska dhisaan waa muhiim waa loo baahan yahay si rasmi ah ayuu noogu furan yahay tababarka taliskuna waa ku mahadsan yahay sida uu ugu dadaalayo in dhanka aqoonta laga dhiso ciidanka” ayuu yiri Wasiirka.
Gudoomiye Eng. Yariisow oo daah furay Wadatashiga Qorshaha horumarinta Qaranka ee sagaalaad
Cunaqabateyntii Hubka ee saarneyd Soomaaliya oo la cusboneysiiyay Dowladda Eritrea laga dul qaaday
Soomaliland oo jawaab ka bixisay gudigii wadahadalka ay ku dhawaqdey Dowlada Federaalka
Horjooge ka tirsanaa Al-Shabaab oo isku soo dhiibay Maamulka Degmada Bardaale
Daawo: Ra’iisul wasaare Khayre oo sheegay in Cumar Finish lagu aaminay hogaaminta bulshada caasimadda